Indlu encinci eBinz - intle kwaye inexabiso eliphantsi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJuri
I-micro-apartment yanamhlanje kumgangatho ophezulu kwindawo yokuphumla yoLwandle lweBaltic yaseBinz kwisiqithi saseRügen - kuphela i-200 m ukusuka kunxweme oluhle lwesanti-ukuya ekhefini.
Indlu eneflethi eyayigcinwe kakuhle yaphinda yakhiwa ngeminyaka yamashumi asithoba. Ugqirha, ugqirha wamazinyo, umbhaki, umlungisi weenwele, ikhemesti, indawo yokuhlamba impahla kunye nevenkile enkulu zonke zikufuphi. Umbindi wedolophu oyimbali kukuhambo lwemizuzu eli-10 kuphela. Isikhululo sikaloliwe kunye nesikhululo sebhasi e-Rügen simalunga ne-250 m ukusuka apho.
Indlu encinci ye-chic yahlaziywa ngokupheleleyo ngentwasahlobo ka-2019. Isiphumo siyindawo encinci, epholileyo yokuhlala ngaphezulu kwamaphahla eBinz. Iisilingi ezithambekileyo ziyimpawu zestudiyo, ezimalunga ne-15 square metres kuphela ngobukhulu. Nangona kunjalo, uya kufumana yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile. I-studio ineebhedi ezimbini eziqhelekileyo ezinomlinganiselo we-90 cm x 200 cm, itafile encinci yokutya kunye netafile yokusebenza enezitulo ezibini ezikhululekile kunye nezihlalo zeenyawo, kunye nekhitshi encinci ene-sink, ifriji kunye nefriji yefriji, i-2-ring stove kunye ne-microwave. Iwodrophu ekhuselekileyo kunye nescreen esisicaba seTV sigqibezela unikezelo. I-WiFi yasimahla iyafumaneka. Igumbi lokuhlambela elahlukileyo elinesitya sokuhlambela kunye nendlu yangasese ligqibezela unikezelo.
4.73 out of 5 stars from 67 reviews
4.73 · Izimvo eziyi-67
I-Binz yeyona ndawo inkulu kwaye idumileyo yokuphumla elwandle kwisiqithi saseRügen kwaye idume kakhulu njengendawo yeholide. Ukongeza kulwandle olunesanti olunekhilomitha ubude, uya kufumana isiseko esihle esineendawo zokutyela ezininzi, iiresityu kunye nenkcubeko eninzi eneekonsathi ze-spa kunye neemyuziyam. Iminyhadala yemidlalo emihle kunye nendalo ephefumlayo enamawa etshokhwe, ihlathi legranite kunye nolwandle oluninzi luya kukukhuthaza.
Umbuki zindwendwe ngu- Juri
Gastgeber, der selbst gern reist.
Ungandifowunela nangaliphi na ixesha okanye undibhalele kwincoko, nam ndisabela ngokukhawuleza ;-)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Binz